Saliid saytuun leh dhalo madow | Black Périgord gawaadhida waaweyn ee sanduuqa loogu talagalay VIP - VIP truffles.
Saliid saytuun leh xamuul.
Saliid saytuun dabiici ah oo leh udgoon dabiici ah ee madow truffle (50ml ama dhalada 250ml), qarax dhadhan
Saliida saytuunka waxaa laga sameeyaa saytuun madow oo dabiici ah marka la bislaado. Saytuunkan ayaan soo marin wax daaweyn kiimiko ah. Saytuunka madow waxay bixiyaan qoraallo xariif ah oo ah kookaha iyo hoosta. Udgoonadan saytuunka madow waxay si xeeladeysan u xoojinayaan udgoonkii caadiga ahaa ee caadiga ahaa. Waa qarax dhadhan loogu talagalay dhadhankaaga!
Sidee loo isticmaalaa saliidda saytuunka dabiiciga ah ee udgoonka dabiiciga ah ee madow?
Saliida saytuunka ah ee dhadhanka lagu shubo ayaa kor u qaadi doonta suxuunta ugu fudud, suxuunta kulul ama qabow, waxayna kor u qaadi doontaa suxuunta la safeeyey. Dhammaan isku darka cuntada waa suurtagal. Qoyskaaga iyo martidaadu si farxad leh ayey ula yaabi doonaan dhadhanka wanaagsan ee u diyaargarowgaaga. Farxad dhab ah ayey u tahay cunno kariyeyaasha khibradda leh ama kuwa xilliyada qaarkood wax karsada.
Waa kuwan tusaalooyin qaar ka mid ah isticmaalka saliidda saytuunka ee dhadhanka culus ee loo yaqaan 'truffle truffle':
Baradho la shiiday,
Maraq feedho ah
Dhalada 250 ml oo saliid saytuun dabiici ah oo udgoon dabiici ah ee madow madow waa fikrad hadiyadeed oo loogu talagalay gourmet